U.S. Gains From China Deal Come ataCost
WASHINGTON Trump administration officials predicted big gains for the economy fromanewly announced trade deal with China, but the economic losses sustained duringabruising 19-month trade war will not be easy to make up. Inatelevised interview December 15, President Donald Trump’s top trade negotiator praised the progress...
BRUSSELS European Union lawmakers approved an increase in U.S. beef imports to the EU on Thursday,amove likely to ease transatlantic tensions. But they also criticized tariffs imposed by U.S. President Donald Trump on metal imports andathreat he has made to target EU cars and car parts. The European...
PARIS The coronavirus will accelerateaDarwinian shakeout in Europe’s overcrowded airline industry that ultimately benefits Ryanair and British Airways owner IAG, industry experts predict. Nobody is exempt from the short-term pain that has already seen Flybe collapse and Norwegian Air stock lose about 70 percent of its value in a...
Boeing madeadecision December 16 that the company had long resisted: To temporarily stop producing its most popular passenger jet, the 737 Max, which has been grounded for nine months in the wake of two crashes that killed 346 people. The impact of that decision is stretching far beyond...
ကျွန်တော်တို့ အစားအသောက်မလိုဘူး၊ နှာခေါင်းစည်းပဲ လိုတယ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ရှေ့တန်းမှ ဆောင်ရွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော သြစတြေးလျရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် ကျေးဇူးတင်စာလွှာများကို နေ့စဥ်ပင် လက်ခံရရှိနေပြီး အချို့လူများကတော့ ပီဇာများယူလာပေးတတ်ကြကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းတို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းမှာ ရောဂါပိုးကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်မပေးနိုင်သော လက်လုပ် မျက်နှာအကာအကွယ်များကို အစားထိုးနိုင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော နှာခေါင်းစည်းများဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ဆေးရုံအချို့ရှိ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများမှာ N95 နှားခေါင်းစည်းများကို ရရှိရန် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသော်လည်း လမ်းပေါ်လျှောက်သွားနေသည့် သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများကတော့ အဆိုပါ နှာခေါင်းစည်းများကို ဝတ်ဆင်ထားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ "ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရေးသား ပေးပို့တဲ့ စာတွေကို ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းရတယ်။ တချို့ဆိုရင် ပီဇာလိုမျိုး စားစရာတွေတောင်ယူလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက 'ကျွန်တော်တို့ အစားအသောက်တွေမလိုဘူး၊ နှာခေါင်းစည်းပဲလိုတယ်'လို့...
By James Davey LONDON, May9(Reuters) - The British government has told airlines it will introducea14-day quarantine period for most people arriving from abroad to try to avoidasecond peak of the coronavirus pandemic, an association representing the airlines said on Saturday. Airlines UK, which represents British...
LONDON, June 18 (Reuters) - Britain has so far approved the spending of 3.5 billion pounds ($4.38 billion) to keep its railways running during the coronavirus pandemic, the government said on Thursday. Under emergency measures brought in on March 23 for six months, the government has been providing financial support...